UKUBHEKANA NEZINWELE EZIMPUNGA? NAKHU UKUTHI ICAMPHOR INGASIZA KANJANI! - UMNYUZONG.COM - UBUHLE
Ukubhekana Nezinwele Ezimpunga? Nakhu ukuthi iCamphor ingasiza kanjani!
Ikhaya Ubuhle Ukunakekelwa kwezinwele Ukunakekelwa Kwezinwele oi-Amruta Agnihotri Ngu U-Amruta Agnihotri ngoSepthemba 14, 2018
Uma kukhona into eyodwa abesifazane abayisaba kakhulu uma kukhulunywa ngezinwele, impela ukumpunga ngaphambi kwesikhathi kwezinwele. Okulandelayo kuza ukuwa kwezinwele nodaka - kodwa-ke lezi akuzona izinkinga ezinkulu njengezinwele ezimpunga njengoba zingelashwa kalula. Kodwa kuthiwani ngezimpunga?
Kukhona into eyodwa engakusiza ukuthi ususe izinwele ezimpunga kalula - amakhambi asekhaya. Kunamakhambi amaningi asekhaya asisiza ukuqeda izinkinga eziningana zezinwele nezesikhumba nokuthi nazo ngaphandle kwemiphumela engemihle. Elinye ikhambi lasekhaya elimangazayo nelisebenza kahle lokwelapha izinwele ezimpunga i-camphor. Ungase uzibuze ukuthi yini engenziwa yikhampasi ukuphatha izinwele ezimpunga? Yebo, kuningi engakunikeza. Kepha okokuqala kudingeka aqonde ukuthi yini ebangela izinwele ezimpunga.
ulusebenzisa kanjani ubisi ebusweni
Izinwele ezimpunga zidalwa ngenxa yezizathu eziningi - esinye sezizathu ezinkulu kube izakhi zofuzo. Kepha akunjalo ngokuphelele. Kunezinye izinto ezithinta ikhwalithi yezinwele futhi. Ezinye zezimbangela eziyinhloko zibhalwe ngezansi:
Lokhu kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu okufanele zigcinwe engqondweni ngenkathi ubhekene nezinkinga zezinwele. Enye yezimbangela ezinkulu zezinwele ezimpunga ngamakhemikhali. Hhayi-ke, uma ungakaze ufake imibala izinwele zakho noma wenze noma yiluphi uhlobo lokwelashwa kwezinwele, pho amakhemikhali athinta ikhwalithi yezinwele zakho yini? Okokuqala, i-shampoo oyisebenzisayo mhlawumbe iqukethe amakhemikhali ayingozi ongahle ungazi.
Ngaphandle kwe-shampoo, udayi wezinwele noma izinto zokulungisa izinwele nazo zingathinta ikhwalithi yezinwele okuholela ekushayeni izinwele ngaphambi kwesikhathi.
2. Imikhuba yokudla
Lesi ngesinye futhi isizathu sokumpunga ngaphambi kwesikhathi izinwele. Okudlayo yilokho okukhombisa ngaphandle - futhi kungaba nemiphumela emibi - enye yazo izinwele ezimpunga. Ikhwalithi yezinwele ihlobene ngqo nenhlalakahle yakho yangaphakathi. Iphilile ngaphakathi, iphilile ngaphandle. Okulula, akunjalo?
Ukucindezeleka kungaba esinye isizathu esikhulu sezinwele ezimpunga. Amashejuli we-Hectic nempilo ematasa ngesinye sezizathu zezinwele ezimpunga. Esinye isizathu esihlobene nengcindezi esixhunyaniswe nezinwele ezimpunga ukudla okungenamsoco notshwala.
4. Ukushoda kweMelanin
Lesi ngesinye isizathu sezinwele ezimhlophe ngaphambi kwesikhathi. Kwenzeka lapho ukukhiqizwa kwe-melanin emzimbeni wakho kuphazamiseka. Kungaba ngenxa yokuntuleka kokudla okunomsoco.
Kungenzeka Yini Ukuvimbela Ukupunga Kwezinwele?
Yebo, kungenzeka impela ukuvimbela ukuphuma kwezinwele ngaphambi kwesikhathi. Kepha lokho kuxhomeke kakhulu ekutheni sikhetha kanjani indlela yethu yokuphila nokuthi ibe yiphi imoto esakhetha ukuyisebenzisela izinwele zethu. Khumbula njalo ukuthi umuntu kufanele akhethe i-shampoo engenawo noma amakhemikhali amancane kakhulu.
Yize kunezindlela zezokwelapha zokubuyisela emuva ukufakwa kwezinwele ezinjengokwelashwa kabusha kombala noma ukwelashwa kwamahomoni, kuhlale kungcono ukukhetha indlela yemvelo.
umehluko phakathi kwepakethe yobuso nemaski yobuso
Ukukhuluma ngezindlela zemvelo zokwelapha izinwele ezimpunga, i-camphor kungaba yinto enhle. Ungabuza kanjani? Uhlu olungezansi luyindlela elula, esheshayo, futhi elula yokwelapha izinwele ezimpunga.
Ungayisebenzisa Kanjani ICamphor Ukwelapha Izinwele Ezimpunga?
• Izipuni ezi-2 zamafutha kakhukhunathi ayintombi nto
• Izimbali ezine ze-hibiscus ezintsha
• Amaphilisi ama-2 e-camphor
• Thatha ipani elincane, wengeze uwoyela kakhukhunathi kulo ulilethele ukubila.
• Ngenkathi uwoyela kakhukhunathi ushisa, engeza izimbali ze-hibiscus kuwo. Hlanganisa umzuzu bese ucisha igesi.
• Faka amaphilisi e-camphor kuso.
• Vumela ingxube ipholile imizuzu embalwa. Qiniseka ukuthi kuphole ngokwanele ukuthi ungabhucungwa ekhanda lakho.
indlela yokwehlisa amanoni emathangeni nasezinqeni ekhaya
• Faka inhlanganisela ekhanda lakho bese uyihlikihla kahle.
• Phinda inqubo nsuku zonke ngoba kuzosiza ukunciphisa ukubukeka kwezinwele ezimpunga ngemuva kokusetshenziswa okuqhubekayo.
Kungani Lokhu Kusebenza
ICamphor inezinto ezilwa nokuvuvukala, elwa namagciwane nezokulwa namagciwane ezisiza ukubulala izintwala, ukulwa nokuwa kwezinwele, ukuvimbela izinwele ezimpunga, ngaleyo ndlela ziqinise izinwele zakho.
Amafutha ezinwele acebile eCamphor asiza ukuqinisa izinwele zezinwele nokugcina impilo yakho yesikhumba. Kuyasiza futhi ukulungisa izinwele zakho futhi kuzenze zilawuleke, zithambe futhi zibe nempilo.
Zama lokhu kugenca okumangazayo kodwa okusebenzayo kwe-camphor ukuvimbela ukuphuma kwezinwele bese uvalelisa izinwele ezimhlophe unomphela!
uwoyela kakhukhunathi ezenzweni zenkinobho yesisu
ukugcina umzimba ufudumele ebusika
kanjani ukunciphisa umzimba ebeleni
mangaki ama-walnuts ongawadla ngosuku
ukuzivocavoca okuhle ukunciphisa amathanga nezinqulu
ukubhebha kanjani intombazane com